Soy de Mac waa warbaahin ka tirsan AB Internet group oo la wadaagi jirtay wararka, casharrada, tabaha iyo dhammaan macluumaadka hadda jira ee ku saabsan tikniyoolajiyadda guud ahaan iyo gaar ahaan Mac dhammaan akhristayaasheeda tan iyo 2008.
Marka la joogo Soy de Mac waxaan cadnahay in waxa ugu muhiimsani ay tahay in lala wadaago macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah ee ku saabsan waxa runtii aad u jecel dhammaan kuwa na soo booqda oo u baahan ama raadinaya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan alaabada ama barnaamijyada la xiriira Apple iyo Mac. Bulshada isticmaaleyaashu way sii kordheysaa maalinba maalinta ka dambeysa maantana waxaan dhihi karnaa waxaan ka mid nahay warbaahinta ugu saameynta badan Macs iyo Apple guud ahaan.
El kooxda tifaftirka ee Soy de Mac Waxay ka kooban tahay qorayaasha soo socda:
Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda qoraalka ee Soy de Mac, buuxi foomkan.
Isuduwaha Soy de Mac ilaa 2013 iyo ku raaxeysiga alaabada Apple dhammaan xoogooda iyo daciifnimadooda. Laga soo bilaabo 2012 markii ugu horeysay ee iMac noloshayda soo gasho, weligey kamana helin kumbuyuutaro sidaa u badan kahor. Markii aan yaraa waxaan isticmaali jiray Amstrads iyo xitaa Comodore Amiga si aan u ciyaaro oo aan u iftiimiyo, sidaa darteed khibrada kombiyuutarada iyo elektaroniga waa wax dhiiggayga ku jira. Khibrada aan ka helay kombiyuutaradaan sanadahan waxay ka dhigan tahay in maanta aan caqligayga la wadaagi karo inta kale ee isticmaala, sidoo kale waxay igu haysaa barashada joogtada ah. Waxaad iga heli doontaa barta Twitter sida @jordi_sdmac
Ma ahayn illaa bartamihii-2000s markii aan bilaabay inaan u gudbo nidaamka deegaanka ee 'Mac' oo aan la socdo MacBook cad oo aan weli haysto. Hadda waxaan isticmaalaa Mac Mini laga bilaabo 2018. Waxaan in ka badan toban sano oo khibrad ah u leeyahay nidaamkan qalliinka, waxaanan jecelahay inaan la wadaago aqoonta aan ku helay mahadsanid waxbarashadayda iyo qaab is-baray.
Guud ahaan taageerayaasha teknolojiyadda iyo gaar ahaan caalamka Apple. Waxaan u maleynayaa in MacBook Pros ay yihiin aaladaha ugu fiican tufaaxa. Fududeynta isticmaalka macOS wuxuu ku siinayaa awood aad ku tijaabiso waxyaabo cusub adigoon waalan. Taabashada Taabashadu waa inay khasab ku ahaato dhammaan kombuyuutarrada.
Hooked on the global created by Jobs and Woz, ilaa iyo markii aan Apple Watch badbaadiyay noloshayda. Waxaan ka helaa isticmaalka iMac-kayga maalin kasta, ha ahaato shaqo ama raaxo. macOS ayaa kuu fududeyneysa adiga.
Bachelor of Medicine iyo dhakhtarka carruurta ee xirfad shaqo. Xamaasad badan ayaan u qabaa teknolojiyadda, gaar ahaan wax soo saarka Apple, waxaan ku faraxsanahay inaan ahay tifaftiraha "iPhone News" iyo "Waxaan ka imid Mac". Hooked on taxanaha ah ee nooca asalka ah. Podcaster leh Actualidad iPhone iyo miPodcast.
Jacaylka teknolojiyada, gaar ahaan waxyaabaha Apple. Waxaan wax ku baranayey macbook, iminkana Mac waa nidaam hawlgal oo maalin walba ila socda, tababbarkayga iyo xilliyada firaaqada labadaba.
Ku waalan tikniyoolajiyadda, isboortiga iyo sawir qaadista. Sida kuwa badan, Apple ayaa nolosheena bedeshay. Anigana macankayga meel walba waan u qaadaa. Waxaan jeclahay inaan la socdo wax walba, waxaana rajeynayaa inay kaa caawin doonto inaad ku raaxaysato nidaamkan hawlgalka sida ugu badan ee aan sameeyo.
Farsamo yaqaan microcomputer ilaa bilowgeygii, waxaan jeclahay guud ahaan teknolojiyadda iyo Apple iyo gaar ahaan wax soo saarkiisa, oo aan aad ula dhacsanahay Mac.
Waxaan si fudud u jeclahay alaabada Apple, sida malaayiin dad kale ah. Macku wuxuu ka mid yahay nolol maalmeedkeyga waxaanan isku dayaa inaan u keeno taada.
Ciise Arjona Montalvo
Sameeyaha nidaamyada IOS iyo IT-ga, oo hadda xooga saaray barashada iyo diiwaangelinta naftayda maalin kasta oo ku saabsan nidaamka hawlgalka Apple. Waxaan baarayaa wax kasta oo la xiriira Mac waxaanan kula wadaagayaa wararka kula socodsiin doona.
Injineer elektiroonig ah wuxuu jecelyahay adduunka Apple iyo gaar ahaan Mac, kuwa kufsiga hal-abuurnimada iyo tikniyoolajiyadda si loo hagaajiyo deegaankeenna. Ku waashay waligood ma quusan iyo barashada daqiiqad kasta. Marka waxaan rajeynayaa in wax kasta oo aan qoro ay adiga wax kuu tarayaan.
Aniga oo had iyo jeer u hamuun qaba in aan wax barto, waxaan jeclahay wax kasta oo la xidhiidha teknoolojiyada cusub iyo isku xidhka ay la leeyihiin qaybta waxbarashada iyo waxbarashada. Aad ayaan u xiiseeyaa Mac, kaas oo aan had iyo jeer wax ka barto, mar walbana aan la xiriiro si dadka kale ay ugu raaxaystaan ​​nidaamkan hawlgalka weyn.
Aad baan u jeclahay tiknolojiyadda guud ahaan, gaar ahaanna adduunka Mac. Wakhtigayga firaaqada ah, waxaan naftayda u huraa maamulka mashaariicda iyo adeegyada webka qaarkood sida iPad Khabiir, Tirakoobka Coronavirus o Cinwaanka IP, had iyo jeer aniga oo wata Mackayga, kaas oo aan maalin walba wax ka barto. Haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahinta iyo wanaagga nidaamkan qalliinka, waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay maqaalladayda.
Qorista iyo teknolojiyadda ayaa ah laba dareenkayga. Iyo tan iyo 2005 waxaan nasiib u yeeshay inaan ku daro iyaga oo kaashanaya warbaahinta gaarka ah ee qaybta, adoo adeegsanaya dabcan Macbook. Waxa ugu fiican dhammaan? Waxaan sii wadaa inaan ku raaxeysto sida maalinta koowaad oo aan ka hadlo barnaamij kasta oo ay u sii daayaan nidaamkan qalliinka.
Salaan baa jira! Weli waan xasuustaa markii aan helay Macgaygii ugu horreeyay, MacBook Pro duug ah in kasta oo aan ka weynaa PC-gaaga wakhtigaas waxaan siiyay kun jeer. Tan iyo maalintaas dib ugama laabaneyn ... Waa run in aan ku sii wado kombiyuutarada sababo la xiriira shaqada laakiin waxaan jeclahay in aan u isticmaalo Mac-kayga si aan "uga jaro" oo aan uga shaqeeyo mashaariicda shaqsiyadeed.